IHtc Legend ngokunzulu | I-Androidsis
Sivavanye i-terminal kangangeentsuku ezimbalwa Intsomi yehtc I-HTC esinike ngovuyo olukhulu, nto leyo esingenako kwaye esingafuni ukuyeka ukuzibulela ngayo kakhulu. Xa sele sitshilo, sizakuzama ukubonisa izigqibo zethu malunga nesi sigxina.
El Intsomi yehtc Kukwithiyori yesiphelo esiza kuthatha indawo yangoku IHtc iqhawe kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifanayo nale, nangona zithe kratya phezulu, iza kuzibeka kuluhlu oluphezulu lwaphakathi kwiitheminali ezikhoyo.
Into yokuqala ebamba ingqalelo Intsomi yehtc Ngaphandle kwayo ngokungathandabuzekiyo ingaphandle layo, igqityiwe ngealuminium eyenziwe ngesiqwenga esinye kunye nokuvula kwindawo yayo esezantsi ekubekweni kwebhetri, i-sim kunye ne-SD encinci. Isiphelo sinemilinganiselo ephantse yafana ne IHtc iqhawe Ngaphandle kobukhulu obuncinci kwi-Htc Legend. Ubukhulu bayo bungu-56,3x112x11,5 mm. I-ergonomics yayo intle kakhulu kwaye ihambelana ngokugqibeleleyo nesandla, nayo, ngenxa yobungakanani bayo, kulula kakhulu ukuyisebenzisa ngesandla esinye.
Kule mzimba mkhulu wealuminiyam inamaqhosha ombane ngaphezulu, iqhosha levolumu kwelinye icala kunye ne "trackball" entsha ebonakalayo ngaphambili. Kwakhona impumelelo entsha le sensor inombala entsha ithatha indawo yebhola yeetheminali zangaphambili, ngakumbi ukuchaneka kufezekisiwe ngale sensor. Esi senzi senzwa sisebenza njengeqhosha lokukhupha i-shutter yekhamera.
Igalelo le-3,5 mm likwindawo ephezulu kwaye kwinxalenye esezantsi sifumana izibuko le-usb encinci.
El Intsomi yehtc une Umboniso weSuper Amoled Uhlobo lwe-3,2-intshi olunamandla kunye nesisombululo seepikseli ezingama-320 × 480. Iqaqambile kwaye isinika imibala ebukhali kakhulu, nangona njengalo lonke olu hlobo lwesikrini emini nangaphandle kunzima ukulujonga ngokuchanekileyo. Ezantsi kwesi sikrini sifumana amaqhosha amathathu okuqala Inkqubo ye-Android, ikhaya, imenyu, umva kunye nokukhangela, zombini isitshixo esingasemva kunye nokukhangela kwisitshixo esinye esenza umsebenzi ophindwe kabini. La maqhosha enziwe ngezinto zeplastiki kwaye isenokuba yeyona nto ndiyithandayo kancinane ngesi sigxina, zinika imvakalelo yokuba ziya kugqibela ngokuhamba kwexesha.
Kwindawo esezantsi ngasemva sifumana isiseko seplastiki esisuswayo kwaye apho sinokufikelela khona kwibhetri, ikhadi le-sim kunye nekhadi le-SD. Ibhetri iyasuswa.
Lilonke, ukugqitywa kwangaphandle, kokubini ngokwezinto ezibonakalayo kunye nobuhle, ngokungathandabuzekiyo yenye yeetheminali enamanqaku aphezulu.
Nangona kugqitywa ngaphandle ifowuni ilungile ukuba i-Hardware ehamba nayo ayisiyiyo, ngekhe ibe sisiphelo esihle. Kule meko i Intsomi yehtc Ukuya kuthi ga ngoku kwaye sinokongeza oko kunokwanela.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, le fowuni iza kubekwa kwinqanaba eliphakathi leetheminali ukuze singakhangeli ezona zixhobo zinamandla ezikhoyo kuyo. A Inkqubo yeQualcomm MSM7227 600 Mhz isantya sikhatshwa ngu I-384 Mb yeRam kunye ne-512 Mb yeROM yintliziyo ye- Intsomi yehtc kwaye zingaphezulu ngokwaneleyo ukuba zinokuhamba ngokumangalisayo ziye Android 2.1 apho i-Htc ifake khona ujongano lwayo IHtc Sense. Ayenzeki njengaxa kwakusungulwa i-Hct Hero ukuba ukulibaziseka okuthile kwaqatshelwa kutshintsho okanye ekuvulweni kwezicelo, kule meko ujongano luhamba ngokulula kunye nexesha lokwenza okanye ukuvula usetyenziso olwahlukileyo luqhelekileyo.
Zonke ezi terminals, zikwabizwa ngokuba zii-smartphones, zize zixhotyiswe ngothotho lonxibelelwano esinokuthi yimigangatho, njenge-Wi-Fi 802.11 b / g, iBluetooth 2.1 ene-EDR okanye iGPS. Iyahambelana ne-HSPA kunye nenethiwekhi yefowuni ye-GSM ukongeza kunxibelelwano kwiinethiwekhi ze-3G / GPRS / EDGE.
Ikhamera yokufota ayinakuphulukana nayo, kule meko ye-5 Mpx ene-autofocus kunye nohlobo lwe-LED. Umgangatho wemifanekiso ethathiweyo ilungile kwaye isoftware yolawulo lwekhamera ibanzi. Le software ayisiyiyo eyisiseko ye-Android kwaye yenye ye-Htc esebenzayo kunye ne-Htc Sense interface esinokuthi sihlengahlengise ngayo i-ISOS, ibhalansi emhlophe, umgangatho womfanekiso, iithoni, ukugcwala, njl.
I-tuner yomsakazo we-Fm ene-RDS ikhona kwifayile ye- Intsomi yehtc evuyiswayo ngabo bethu basebenzisa eli thuba ngaphandle kokukhathazeka malunga nokugubungela kunye nokusika okunokwenzeka ngenxa yokungabikho kwayo.
I-Accelerometer, isivamvo sokukhanya okukufutshane, isivamvo esikufutshane kunye nekhampasi yedijithali nayo iyasilela.
Kufuneka sibeke intlonti Intsomi yehtc kwaye ihambelana nebhetri. I-terminal ine-1.300 mAh lithium-ion ibhetri ethi ithiyori kwaye ngokweenkcukacha zomenzi isiqinisekisa ngemizuzu engama-440 yencoko ngothungelwano lwe-HSPA, i-490 kwiinethiwekhi ze-GSM okanye ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-560 zokuma ukuba sixhunyiwe kwiinethiwekhi ze-HSPA okanye iiyure ezingama-440 Iinethiwekhi ze-GSM. Nditsho ithiyori kuba ngokwenene ubomi bebhetri bufutshane ngandlela ithile. Ukusetyenziswa kwesiqhelo kwemihla ngemihla xa kuthelekiswa nokusetyenziswa okufanayo kwenye itheminali, ibhetri kwiHtc Legend iyaphela ngokukhawuleza. Esi sisiphelo sifuna ukuhlawuliswa phantse yonke imihla kube kanye kwaye ukuba ukusetyenziswa kakhulu, kuya kuba yimfuneko ukubonelela ngebhetri yesibini okanye indawo yokutshaja.
El Intsomi yehtc Yifowuni elungileyo, ephumelele kakhulu kubuhle kunye neempawu zobuchwephesha kunye nezixhobo zokusebenza ngokoluhlu ekucwangciselwe zona. Inguqulelo ye Android 2.1 Kunye ne-Htc ujongano lwayo lusebenza kakuhle kwesi siginali, alunazongezo ukuba le nkqubo yokusebenza ibandakanya imvelaphi yoopopayi okanye igalari yemultimedia, kuba la macandelo afuna ubuchwephesha obuphezulu, nokuba kunjalo ifowuni iseti inika Sonke sinokunikwa yi-smartphone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » IHtc Legend ngokunzulu
Super Amoled okanye Amoled?
Iscreen si-Amoled ngokulula, izikrini zeSuperAmoled ngoku zigcinwe yiSamsung kwiziphelo zazo.
Uxolo, isikrini si-Amoled kuphela.
Molo, ndinengxaki, ndikhethe ukuba xa ucofa iqhosha le-kasa eyona iphambili izakuhlala ibekwa kwaye ngoku andinakukwazi ukungena kwidesktop yesibini ye-htcsense pk andazi, ndicacise nceda enkosi
aki nceda enkosi
UJavier Lorente sitsho
Ngaba ukhe waba neengxaki zokugubungela xa uphucula i-HTC Vodafone ukuya kwiFroyo?
Phendula kuJavier Lorente